ama-tattoos anezincazelo - Tattoos Art Ideas
i-sonitattoo June 23, 2016
Ama-Tattoos aseJapane adume ngezincazelo eziningi nenhloso. I-tattoo yaseJapane ivela ngobujamo obuhlukahlukene nobukhulu. Izinto ezimelela tattoo nazo kumele zilandise izindaba ezingokomfanekiso ezifana nenhlanzi ye-Koi nodrako. Udrako uhlotshaniswa nengcebo, u-ferocity namandla. Uma ubona ama-tattoos ahlaba umxhwele futhi enhle kakhulu, ayaphoqeleka ukuba acele incazelo yombhalo. Kunezithombe ezimbalwa ezimbalwa ezenza ufune ukuma futhi ufune izincazelo zawo. Enye yezinwele ezinjalo i-tattoo ye-dragon eyenza ngokuhlukahluka nezitayela. Indlela odweba ngayo i-tattoo izokukusiza ukuba uqonde iqiniso lokuthi lihle futhi lihle.
Chofoza lapha ukuze uhlole ingosi yakamuva ye-japanese design umqondo wabesilisa nabesifazane.
Izindebe zivame ukusetshenziselwa abesifazane ukuba bakhulume ngomsebenzi osondelene noweqile. Ingavezwa ngemibala ehlukene, intshisekelo noma iphethini. Izindebe ezibomvu zingasetshenziselwa ukukhuluma ngokumangala nokucansana uma ucutshungulwa ezindaweni eziseduze njengeziswini, iziqhwa, intamo, njll. Lokhu kungavezwa ezindaweni eziningi zomzimba ezizoshiya ukumangalelwa. Izindebe ezibomvu eziza ngolimi zingasetshenziswa ukuhlotshaniswa nokusebenzelana nemimoya. Izindebe ezibomvu zingasetshenziselwa ukukhuluma ngezingqikithi zomsindo nezenhliziyo. Futhi ukhulume ngezihloko ze-tab ukuthi ungazihlanganisa nazo.
Uma umlomo uvulwa, ungasetshenziswa ukukhuluma nge-counterculture. Izindebe zisetshenziselwa ukumela ubuhlobo. Izindebe zingasetshenziselwa ukuveza abantu ngesimboli sothando. Uma ulungele ukukhombisa uthando lwakho noma ukukhuluma ngezinga elilandelayo, izindebe zingasetshenziswa ukutshela indaba yakho.
Chofoza lapha ukuze ubuke izindebe zakamuva zezithombe zomdwebo womqondo wabesilisa nabesifazane.
I-tattoo ye-semicolon ingaba encane kodwa into ebaluleke kakhulu. I-tattoo idonsa ukunakwa okuningi futhi isetshenziselwa ukumelana nokulutha, ukucindezeleka, ukuzilimaza, ukuzibulala kanye nokuthanda ukuqhubeka nokuphila. I-semicolon ikhuluma ngenjongo yokuphila, ukuqinisekisa abantu ukuthi ukuphela akukafiki. Namuhla, i-semicolon isibe uphawu lwe-tattoo ukuthi labo abahluleka ukuhlala basebenzise ukuzikhumbuza ukuthi banento yokuphila. Kukhona ubukhulu obuhlukahlukene bale tattoo futhi nguwe okufanele unqume ukuthi ufuna ukuthi i-semicolon yakho ibonakale kanjani. Ekupheleni kosuku, i-semicolon imelela okuthile okukhudlwana futhi okubaluleke kakhulu ongakuqonda.
Labo abakhethiwe bangayinwa le tattoo ukuze babatshele ukuthi bakhona. I-tattoo iyingqayizivele futhi ingakhuthaza abantu ukuthi balandele amaphupho akho. Ungathola ukuphefumlelwa okudingayo uma ukiyipha lezi zithombe emzimbeni wakho. Kuthatha mayelana nobukhosi bomuntu owunayo. Kuthatha mayelana nokuzilawula futhi kukhuluma ngokuvuleka komuntu ophethe i-tattoo.
Chofoza lapha ukuze uhlole imidwebo yakamuva ye-semicolon tattoos umqondo wamadoda nabesifazane.
Ama-Tattoos amancane anencazelo angakusiza ukuthi ubonise izinto eziningi ezenzeka kuwe. . Abantu abaningi abayinki bayakholelwa ukuthi inethonya phezu kwamandla asezulwini kanye nokwenyama, ibonisa umlando nesayensi. Abantu abasebenzisa le tattoo bangenandaba nalokho okushiwo ngenhla ngoba tattoo yenyanga inezincazelo eziningi. I-lotus eluhlaza okwesibhakabhaka imelela ukulawula okungokomoya ngokwengqondo. Imelela ukuhlakanipha, ukuhlakanipha kanye nolwazi. I-lotus eluhlaza okwesibhakabhaka ibonisa umbono wezinkolelo onkolo. I-Octopus tattoo futhi isho ukuthi kukhona ithemba esikhathini esizayo. Ikhono le-octopus ukwenza izinto eziningi ezinemilenze yalo eminingi yilokho okwenza abantu bakholelwe ukuthi isidalwa siningi. I-feather tattoo ingasho umqondo wenkululeko ngoba ihlotshaniswa nezinyoni. Izinyoni zibhekwa njengezilwane zamahhala futhi yingakho zingakwazi ukuhamba zivela kwezinye izingxenye zomhlaba. Impaphe eyodwa noma ngisho neziningi zingakhuluma ngokufuna inkululeko.
Wonke lawa ma-tattoos angasebenzisa ukumela izinto eziningi ngisho noma ezincane kunoma iyiphi ingxenye yomzimba.
Chofoza lapha ukuze uhlole umqondo womdwebo wakamuva wamadodoma abesilisa nabesifazane.
Angel tattoo akuyona into emangalisa ngenxa yezincazelo ezinhle kakhulu ezithinta. Kumele ukuba ubone i-angle ewile enezincazelo zayo. Kungakhathaliseki ukuthi ingelosi idonselwa kanjani kuwe, isakunikeza incazelo ekhethekile. I-tattoo ingabeki izinto ezimbi. Bakhuluma ngokuma ngaphezu kwezinselele noma ukuhamba ngaphambi kwesikhathi esibucayi empilweni. Lezi ezinye zezincazelo eziza ne-angel tattoo.
Izincazelo zezingelosi nazo zingashintsha endleleni umuntu ogqoka ngayo ayisebenzisa ngayo. Ukuthula nokuthula kungaboniswa yingelosi kwabesifazane ngenkathi amadoda angenza ngokwezifiso ingelosi ngendlela abayifunayo. Ngamaphiko, izingelosi zimelela okuthile okuhlukile. Ingelosi ingafakwa kunoma yisiphi isignali ukwenza kube nencazelo ekhethekile. Uma uthanda ingubo yakho yezingelosi, kuyadingeka ukuthi unomqondo ofanele ukuhumusha ingelosi yakho kulokho ofuna ukukusho.
Chofoza lapha ukuze uhlole ingosi yakamuva yezithombe zomdwebo womuntu wesilisa nabesifazane.
I-tattoo yesikebhe ibonisa ukuqina namandla. Uke wabona umdwebo we-ankle ngaphambili? Le tattoo yaqala eminyakeni eminingi edlule yi-Sumerians. I-tattoo isibe yinye yezithombe zomhlaba ezindala kakhulu futhi yayisetshenziswa namaKristu okuqala. Lokhu kwaba lapho beshushiswa ngenxa yezinkolelo zabo. Kuhlanganisa isevisi yasolwandle ku-ejensi yokudoba njengesikebhe, amandla, ukuphepha nokuvikeleka,
Chofoza lapha ukuze uhlole umbono wamuva we-anchor womklamo womuntu wesilisa nabesifazane.
Umcibisholo Tattoo Meaning
Umcibisholo uyaziwa njengophawu lwamaNative America futhi sesinye sezici ezikhuluma ngomdwebo. Lapho umcibisholo uwela, ukhuluma ngobungane futhi uma ungabhekwa njengamandla uma kuwukwesikhwama. Uma umcibisholo udabula idayimane, uyaziwa ngokuthi isibindi ngenkathi umcibisholo wedwa ubizwa ngokuthi ukuvikelwa nokuvikela.
Uma idonselwa uphawu lwedayimane, lingabonisa isibindi njengoba umuntu eqhubekela phambili. "Bathi futhi, Umcibisholo wedwa uvikela ukuvikela nokuvikelwa kokulimala. Ingasetshenziswa futhi njengesibonakaliso sokuhamba noma isiqondiso. Imicibisholo ingahle ipholile futhi ingahle ibekwe ngokwezifiso ngokusho kwencazelo yezingubo. Umbala, ukuthungwa kanye nendlela okudonsa ngayo yilokho okwenza umdwebo womcibisholo ube yinto engcono kakhulu emzimbeni womuntu. Ngomdwebo womcibisholo, owesilisa noma wesifazane angathatha imiklamo emangalisayo ukuze abukeke i-chic. Isiyingi semicibisholo emihlanu simelela amandla, kepha umcibisholo owodwa ungaphula kalula. Isixuku semicibisholo sinzima kakhulu ukuphula. Umcibisholo uyaziwa ukuthi ungumthombo wamandla kulabo abafuna izindlela zokuphatha ukwesaba kwabo nokuma ngaphandle kwesixuku.
Chofoza lapha ukuze ubone umcibisholo wamuva womcibisholo womdwebo wamadoda nabesifazane.
I-Butterfly ikhuluma ngomoya nangothando. Kungabonisa isimo sengqondo ngisho nothando, isifiso nokuthanda. I-butterfly inhle kakhulu futhi iyigqabhagqabha okuyimbangela yokuthi abesifazane abaningi bahlale befuna ukuwafaka emzimbeni wabo. Ukuziqhenya nokuziqhenya okwenyukayo uma kuyinki kuyamangalisa. Kungumsebenzi womuntu ogqoke ukunquma ukuthi uzobekwa kuphi umbhalo.
Chofoza lapha ukuze uhlole umbono wamuva we-butterfly tattoos umqondo wabesilisa nabesifazane.
Ama-tattoos e-Cherry akha ama-tattoos angabonisa i-fragility yokuphila futhi akhulume nobuhle. Abesifazane bayakuthanda ngoba kukhuluma okuningi ngabo. Kuyakhuthaza abesifazane abafuna izindlela zokutshela izindaba zabo emhlabeni. Uma ukhetha i-cherry blossom tattoo, ukhuluma ngothando olulahlekile lwabanye okumele ukuba baphishwe. Iza ngezindlela ezehlukene nezindlela ezihlukahlukene futhi ngokuyinhloko ngokwesiko esivela kuyo. Abantu abaningi abathanda i-tattoo bangayisebenzisa ukuveza izinto eziningi.
Namuhla, ngisho namadoda ayengena inkinobho ye-cherry ukuhlobisa ukuthi ingaba kanjani okuhle uma kuziwa ekuthandeni abalingani babo. Futhi ukufanisana nabalingani babo njengoba kukhuluma ngoLuck, Love, Impermanence, Ukuhlanzeka, Ubuhle, Ukuhlukumeza, Amandla, Nobumbono, Ukuvuselelwa, Ukuguqulwa nokuPhumelela. Imbali iyafana nokuvuselelwa okubonakala ngesikhathi sasehlobo. Njengengqungquthela yasentwasahlobo, izimbali ze-cherry zifanekisela ukuvunwa okuhle, ukuvikelwa kwezitshalo kanye nokubuya okubukhali kokuphila emva kokushisa okunzima. Uphawu lenye into eyenza i-tattoo ibe yintandokazi yabantu ikakhulu abesifazane.
Chofoza lapha ukuze uhlole i-cherry blossom i-tattoos design idea yabesilisa nabesifazane.
Esinye sezizathu zokuba abantu bahambe ikhampasi tattoo kungenxa yokuthi limelela. I-Compass tattoo inezincazelo ezahlukene kodwa kulabo abasemanzini, kubalulekile ngempela. Kusho uphawu lwezinhlanhla, ukuvikelwa nokusekelwa. I-tattoo ivela ngokuhlukahluka okuhlukahlukene kanye nezitayela. Kunezinhlobo zalezi zithombe eziba nezincazelo eziningi kumuntu ogqoka. Ukulandela iphupho lakho kungenye yezincazelo zakho ze-tattoo. Awudingi ukuhambisa kude ukuze wenze isimo sakho empilweni eyaziwa kwabanye. Ngalesi tattoo, kulula ukuba utshele umhlaba indaba yakho ngaphandle kokwenza umsindo.
Umdwebo kunoma iyiphi ingxenye yomzimba we-tattoo ukutshela ngesibindi ukuthi kungani uyenzile i-tattoo ekuqaleni. Lumele isiqondiso nesiqondiso, futhi isibonakaliso senhlanhla. Yingakho izithombe eziningi ze-compasses zingabonakala zidwetshiwe emikhumbi. Ukuthandwa kwe-tattoo kuyinto ongayithanda uma ubona noma yikuphi. Lezi zinsuku, akusekho amadoda asebenzisayo kodwa nabesifazane abafuna ukubheka imfashini.
Chofoza lapha ukuze uhlole i-compass tattoos umqondo womqondo wabantu nabesifazane.
Iyini incazelo yalesi tattoo? Abantu abaningi banencazelo ehlukile ye-dragon tattoo. Noma kunjalo, umdwebo wezithombe ezibonakalayo ungasho izindaba ezinhle, inhlanhla, ukuvikelwa nokuchuma. Kukhona ezinye izincazelo ezifana nemilingo, ukuhlakanipha, ukulwa, ukuhaha, amandla, ukuzala, ubumbano, ukuhlakanipha, amandla, ukuvutha, ingokomoya, injabulo nezinye izincazelo eziningi.
Kunezithombe ezimbalwa ezimbalwa ezenza ufune ukuma futhi ufune izincazelo zawo. Enye yezinwele ezinjalo i-tattoo eyidrako efika ngokuhlukahluka kanye nezitayela .Isichazamazwi sogadrako sivela ezinhlobonhlobo ezehlukene ngenkathi siyifaka emzimbeni. Abanye abantu futhi bangezela imibala ku-dragon yabo tattoo ukuze babonakale behlukile futhi behlelwe ukunambitheka kwabo. Le tattoo ingafakwa kunoma iyiphi ingxenye yomzimba futhi izobe isitshela indaba ukuthi kusho ukuthini. Ukubaluleka kanye nencazelo ye-tattoo yilokho okuheha abantu abaningi abathanda izithombe ezinkulu.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wakamuva we-dragon tattoos umqondo wabesilisa nabesifazane.
Incazelo yombhalo wezindlovu inezincazelo ezahlukene kubantu abahlukene. Indlovu ingasho ukuthula, amandla namandla. Kubonakala kulabo abafuna ukuxhumana, ukuhlakanipha, inhlanhla nokuphumelela. Abanye abantu bakubheka njengento yokuzala kanti abanye bayithatha njengokuzinikela, ukucabangela, ukubekezela nokuhlanzeka.
Izindlovu nazo zicatshangelwa eceleni kwamafu nokuchuma, ubuhle, injabulo, inkumbulo, ukuzimisela nokungabonakali. Izitembu zezindlovu zivela ngezindlela ezahlukene nobukhulu. Kodwa-ke, kuwumsebenzi womuntu ombetheyo ukuthi anqume ukuthi kuzothathwa nini i-tattoo. Wonke umuntu othanda le tattoo unesifiso sencazelo futhi angakutshela ukuthi basebenzisa kanjani i-tattoo endaweni ababenayo ngayo. Indlovu imelela ukuchuma, imemori, ?? Injabulo, ?? Nobility, ?? Ukunquma, Ukungavumelani nokuzwela.
Chofoza lapha ukuze uhlole izendlovu zakamuva zendlovu umqondo womklamo wamadoda nabesifazane.
Chofoza lapha ukuze uhlole i-koi fish tattoos design umqondo wamadoda nabesifazane.
I-Lion Tattoo isho
I-tattoo yengonyama ihlale inesabekayo ekubukeni kwayo futhi ikhuluma ngokuziqhenya, isibindi, ubukhosi kanye namandla. Kunezincazelo ezahlukene ngokulandela amasiko. Ibhubesi lingasho futhi ukuhlanzeka, amandla, isibindi, isibindi, ukwethembeka, ukuzethemba, ukuvikelwa, ukwethembeka, amandla, ubuqotho kanye negunya. Incazelo yombhalo wezingonyama kubaluleke kakhulu ukuthi yisiphi isizathu esenza abantu abaningi bahlale befuna ukwazi ukubaluleka kwalokho abakuyi-inking. Ubuciko buhle futhi bungakwazi ukumboza noma yikuphi ubuciko bomzimba ngisho nezingxenye ezincane kunazo zonke ezifana neminwe.
Imibono ekukhulumeni ngezingonyama yilokho okwenza kube yinye yezithombe ezinhle kakhulu ezizofakwa kuzo. Amabhubesi amabili abuzwa emuva abuye asitshele ngokuphuma kwelanga nokushona kwelanga noma ngisho neMpumalanga ezayo ukuhlangabeza iNtshonalanga. I-Lion ingakhuluma ngesiqondiso futhi ingabonakala kwezinye izindawo ezingcwele noma ezihlonishwayo emhlabeni jikelele.
Imibala ukuthi i-tattoo iza kanye nokunquma izinto eziningi futhi. Ungakwazi ukunquma umbala nokuma kwe-tattoo. Ukwenza ngokwezifiso kubaluleke kakhulu ukuthi yisiphi isizathu esibona izinhlobo ezihlukahlukene zezingonyama ezingxenyeni ezihlukene zomzimba. Ukuklama kwe-tattoo kumangalisa nje.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wezingonyama zakamuva zamabono amadoda nabesifazane.
I-Lotus tattoos ingaba yinkimbinkimbi futhi imidwebo ye-tattoo enencazelo eye yabenza ibe yinto emangalisa kakhulu. Imibala ye-tattoo yikho enikeza i-lotus tattoo izincazelo ezahlukene. I-lotus emhlophe ikhuluma ngengqondo nangokomoya. Ikhuluma ngokuphelela nokuhlanzeka.
Kunezinhlobo ezihlukahlukene zezithombe ongazisebenzisa ekushintsheni indlela obukeka ngayo. Thatha isibonelo, izimpaphe eziza ngezimo nobukhulu obuhlukahlukene. Ayikho ingxenye yomzimba ukuthi ayihambisani nayo. Iyini incazelo ye-tattoo? Abantu abaningi banezincazelo ezihlukile kulo. I-Lotus tattoo yi-symbolic okuyinto esenza abantu bahambe kalula ngabo ikakhulukazi abangokwenkolo ababona okunencazelo eningi kule tattoo enhle. Kungadonsela izinhlanzi ze-koi ukuze kube nencazelo emangalisayo yothando, impumelelo, inhlanhla, ikhono lokumelana nezithiyo kanye nezingozi.
Chofoza lapha ukuze uhlole umbono wamuva we-lotus womdwebo wamadoda nabesifazane.
I-feather tattoo ingasho umqondo wenkululeko ngoba ihlotshaniswa nezinyoni. Izinyoni zibhekwa njengezilwane zamahhala futhi yingakho zingakwazi ukuhamba zivela kwezinye izingxenye zomhlaba. Impaphe eyodwa noma ngisho neziningi zingakhuluma ngokufuna inkululeko. Futhi, izimpaphe zikhuluma ngokulinganayo mayelana nesici sokunyakaza, imibono, ikhono lokusebenzisana nokuhlakanipha. Izimpaphe zingabamela labo abadlulile, ukuxhumana nabafileyo.
Ama-tattoo amathanga amanye ama-tattoos amahle kakhulu ongayibona nxazonke. Kuyinto engavamile futhi ekhethekile. Akuwona wonke umuntu obona lezi tattoos on. Uma ufuna umdwebo we-tattoo ukuze ufune ukukhululwa kwakho, lo tattoo umane nje ozohamba ngenxa yobuhle nokubaluleka. Zibuye zimelele izipho eziwela esibhakabhakeni. Lezi zimpaphe zisho inkululeko, iqiniso, ukukhanya, isivinini, ukuphakama, indiza, umoya ophezulu, amaphupho, ukuhlanzeka, isibindi, isithembiso, ubugqila, ithemba, ukuxhumana, kolunye uhlangothi, Uhambo lomphefumulo, Ukuhamba, iMicikilisho, ukuLevi nokuLwela. Ama Tattoos aklanyelwe kahle ukukunikeza ukuthi ungubani. Kunezinhlobo ezihlukahlukene zezithombe ongazisebenzisa ekushintsheni indlela obukeka ngayo.
Chofoza lapha ukuze uhlole umbono wamanje we-feather tattoos umqondo wabesilisa nabesifazane.
I-Owl imelela ithemba ezinkathini ezesabekayo noma ezibuhlungu. Umqondo onamandla we-owl ebusuku ngoba umbono wakhe omangalisayo uyabathanda abantu. Kungasho ubufakazi bokuthi kukhona ukukhanya ekupheleni komugudu. Ukusho komdwebo kungaba namandla, imilingo, iphupho, ukucaca, isiqondiso, intuition, ukuhlakanipha, ukuqaphela nokuvikelwa.
Kusho ukuxhumeka kobuciko, amandla kanye namaphupho angcono. Isibungu singadonselwa ngezindlela eziningi futhi ziphethe ngokusho okukhulu ukuthi uzothanda. I-owl tattoo ingaba isikhumbuzo somuntu ofa futhi nokuthi sonke kufanele siphile kulo mpilo ngokugcwele.
Imiklamo yezinkukhu ibuye ibe nezincazelo zayo njenge-tattoo popular owl tattoo ngokuvamile ebizwa ngokuthi i-owl tattoo tattoo noma i-candy owl tattoo. Thatha isibonelo abaseMexico bathanda usuku lweT tattoo ngenxa yendima ebeka kuyo. Kunezindlela ezihlukahlukene ukuthi umuntu angayidonsa lokhu emzimbeni ukwenza umehluko. Ekupheleni kosuku, ngumuntu ogqokayo, ongakwazi ukukhuluma kalula ngalokho okushiwo umdwebo.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wamuva we-owl womdwebo wamadoda nabesifazane.
Rose Tattoo kusho
Rose ubonisa uthando. Labo abathandana bangakwazi ukubona ukuthi i-tattoo yama-rose ilula yini. Lapho i-rose ingekho ngamameva, kusho ukuthi akukho mhlatshelo okufanele wenziwe uma uthandana futhi, lapho kunameva, kusho ukuthi kukhona umhlatshelo okufanele wenziwe. Ubuhle obungapheli yilokho i-rose engasho nakwabanye abantu. Abanye abasolwandle bakhetha le tattoo ngenxa yezinhloso zayo ezikhethekile. Iphinde ihlotshaniswe nobufazi okwakubhekisela ikakhulukazi kumantombazane akhethekile asele ngemuva kohambo. Ngisho nkulunkulukazi abathile bahlonishwa nale tattoo. I-Rose ingasetshenziswa futhi ukukhuluma ngokulinganisela. Kusele izinsuku lapho ama-roses kuphela kwabesifazane.
Namuhla, ngisho nabesilisa bayayinaka le tattoo ukuze babonise ukuthi bangaba kanjani okuhle uma kuziwa kokuthanda abalingani babo. Kusho Uthando, Ukuvuswa nokuzalwa kabusha, uMoya noMoya, Ukuguqulwa, Ukomoya kanye Nomphefumulo, Ubumnene nokuBesifazane. Ukuziqhenya nokuziqhenya okwenyukayo uma kuyinki kuyamangalisa. Kungumsebenzi womuntu ogqoke ukunquma ukuthi kuyokwenziwa yini tattoo. . Ubuciko buhle futhi bungakwazi ukumboza noma yikuphi ubuciko bomzimba ngisho nezingxenye ezincane kunazo zonke ezifana neminwe. Ukubaluleka komdwebo wendawo kuncike endleleni umuntu obengenayo eyicabanga ngayo.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wakamuva wama-tattoos womqondo wabesilisa nabesifazane.
I-tattoo yama-tribal ibonisa amandla noma isibindi sokunqoba izithiyo. Incazelo yezinhlanga ivela kumasiko noma ezindaweni noma ngisho nendawo. Iqala ezinsukwini zasendulo lapho abanye abantu bethola ukuhlonza kwabo ngokusebenzisa izithombe. I-tattoo ye-tribal isetshenziselwa ukukhuluma ngezinkolelo ezingokomoya noma zenkolo. Isetshenziselwa ukufihla noma ngisho nokuvikelwa. Ibuye isetshenziswe izindaba zokutshela ukuthi akekho umuntu ongakwazi ukutshela ngaphandle kwesizwe esivela kuwo. Awudingi ukuhambisa kude ukuze wenze isimo sakho empilweni eyaziwa kwabanye. Ngalesi tattoo, kulula ukuba utshele umhlaba indaba yakho ngaphandle kokwenza umsindo.
Chofoza lapha ukuze uhlole ama-tattoo osanda kuboniswa umqondo wabantu nabesifazane.
I-Wolf tattoo ingasetshenziselwa ukukhuluma ngabantu abafuna inkululeko. I-tattoo nayo isho ukuthandana nokuhlonipha, amandla kanye nobuqotho. Wolf ingasho futhi zasendle, umndeni, amandla, ukukhanya, ukuvikelwa, inkululeko, ukusinda nokuningi okuningi. . Endleleni yaseSiberia, impisi ibizwa ukuba ivikele ukuphepha kwezingane - futhi ihlolwe ngokukhethekile ukuqinisekisa ukubeletha okunempilo. Eurasia endala, impisi yayiyisivikelo sezimfihlo. Kubonakala sengathi uma utshela imbuzi imfihlo yakho, wawususa umthwalo wokuwuthwala ngenkathi impisi ingakuvikela ulwazi kuze kube phakade.
Abantu abaya ematokeni yempisi abalawulwa yintandokazi ngoba bakholelwa ku-instincts. Abathandi bayayinatha le tattoo ukuze babonise ukuthi bangaba namandla kangakanani. Impisi ikholakala ukuthi iyisivikelo salabo abafe. Yingakho bavame ukubonakala emathuneni noma emathunjini.
Chofoza lapha ukuze uhlole ingosi yakamuva yesikhumba semidwebo yamadoda nabesifazane.
ama-tattooflower tattoosizinyawo zamathamboizibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyeziama-tattoo amahangeTattoos yama-Ankleangel tattoosamathumbu esifubatattoos cutetattoos zomqheleidayimani tattootattoos eaglei-scorpion tattoorose tattoosama-tattoo kubantui-octopus tattooizithombe zezingonyamaimibono ye-tattooabangani bomngane abangcono kakhuludesign mehndiamathrekhi we-butterflyizithombe zezinhlangaumdwebo we-watercolortattoos udadeukubuyisa izithombeI-Heart Tattoosizithombe zezinyangaumdwebo wezindlovuI-Feather Tattooumculo womdweboimidwebo yamasleeimisindo yezintamboimibhangqwana emibhangqwanai-henna tattooama-sun tattoosbird tattoosukudubula izithombei-compass tattootattoo isokoi fish tattooumdwebo womcibisholoama-Tattoos amantombazaneTattoos zeJomethrikhiama-tattoos engaloama-cat tattoosuthando izithombetattoo engaphelii-cherry ehlobisa i-tattoongesandla izidakamizwalotus flower tattoo